"Ary niantso tamin’ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe: Raiko ô, eo an-tànanao no atolotro ny fanahiko; ary rehefa niteny izany Izy, dia afaka ny ainy." Lioka 23:46
Ny famonoana amin’ny hazofijaliana dia fomba tena mahatsiravina indrindra. Rehefa nijaly nandritra ny ora maro ilay voahombo, dia maty noho ny hasemporana sy ny harerahana. Fa tsy mba tahaka izany kosa no nahafatesan’i Jesosy. “Niantso tamin’ny feo mahery” Izy, vao afaka ny ainy. Na talohany, na taorianany, dia tsy nisy olona nohomboana ka maty tahaka izany. Tsy misy afa-tsy Kristy no manana fahefana amin’ny ainy, ka afaka nilaza hoe: “Tsy misy manaisotra ny aiko amiko, fa ny tenako ihany no manolotra azy. Manana fahefana hanolotra azy Aho, ary manana fahefana haka azy indray. Izany didy izany dia azoko tamin’ny Raiko” (Jaona 10:18). Ilay kapiteny romana, tompon’andraikitra tamin’ny famonoana ireo voaheloka, dia gaga raha nahita izany fomba fahafatesana izany, ka niteny hoe: “Marina tokoa fa Zanak’Andriamanitra io Lehilahy io” (Marka 15:39).
Ireo rehetra nanatrika teo dia samy nahare ilay teny notononina avy teo ambony hazofijaliana hoe: “Vita”. (Amin’ny teny fototra grika, io dia voambolana iray ihany, hita eo amin’ny faktiora voaloa tanteraka: “Tetelestaï”.) Toy ny milaza izany hoe efa voaloa avokoa ny trosa be vokatry ny ota. Izay manaiky fa ho an’ny tenany izany, dia tsy ananan’Andriamanitra trosa intsony.
“Vita”. Tanteraka ny asam-pahasoavana.
Velona ihany ny hiakam-pandresena.
Ilay maty sy nanondrika ny lohany
Dia nandresy! Vita.
Ny olom-bery, tao anaty fahorian-dalina,
Dia nahita ny ota nofoanan’i Jesosy.
Mba hanefany ny tambiny mavesatra,
Dia nijaly Izy. Vita.